Asaivo miampy ny fijerena Google Galaxy anao miaraka amin'ny fampiharana ity | Androidsis
Manuel Ramirez | | Fampiharana Android, SmartWatch
Androany dia mandeha isika hampianatra ny fomba ananana Google Assistant amin'ny finday avo lenta Samsung Galaxy miaraka amin'ny fampiharana antsoina hoe y GAssist ary azo antoka fa halainao am-pitiavana be ianao. Indrindra satria amin'ity fomba ity dia afaka mifindra avy any Bixby ianao, mpanampy an'i Samsung ary tapa-kevitra izy fa afaka manolo ny Google Assistant.
Raha ny marina dia nanomboka i Samsung hanaisotra ny mifanentana amin'ireo fampiharana hafa fanatanjahantena ho an'ny akanjo anaovany ary noho izany dia saika nanery ny mpanjifany hampiasa ny fampiharana Samsung Health azy ireo manokana. Tsy izany no izy, satria miresaka momba ny Google Assistant isika, saingy misy ifandraisany betsaka amin'ny faniriana hanidy ny varavarana amin'ireo safidy hafa tsara kokoa.
1 Raha miala amin'i Bixby ianao ary maniry ny Google Assistant
2 Ahoana ny fananana Google Assistant amin'ny smartwatch Samsung Galaxy
3 Fepetran'ny fampiharana
Raha miala amin'i Bixby ianao ary maniry ny Google Assistant
Tsy vitan'ny hoe miresaka momba ny fetra amin'ny akanjo azo entina isika, fa efa nanana azy io ihany koa tao amin'ny Samsung Galaxy farany ambony miaraka amin'ity bokotra Bixby ity fa hatramin'ny tsy ela izay dia tsy afaka natao ny nametaka azy tamin'ny rindrambaiko hafa. Farany nanome i Samsung ary nanome ny safidiny ho an'ny sarintany ny mpampiasa azy; raha ny tena izy azonao atao ny mahafantatra ny dingana ato amin'ity publication ity.
Lazaina ny marina, Bixby tsy ho afaka mifaninana amin'ny sehatra Google Assistant iray ihany noho ny antony maro, ka izany no mahatonga ny mpampiasa maro mitady vahaolana hananana ny Google Assistant eo an-tànany miaraka amin'ny smartwatches Galaxy. Izay vahaolana omena izay tonga lafatra dia ny app GAssist izay azo alaina ho an'ny Galaxy Watch sy ny smartwatches hafa miaraka amin'ny Tizen miaraka amin'ny version 4.0 na avo kokoa.
El Kamil Kierski no mpandrindra miandraikitra ny GAssist.net ary nametraka izany ho an'ny rehetra avy amin'ny Google Play Store. Haneho anao ny fomba fametrahana ny fampiharana izay mety misy dingana sarotra izy ireo, saingy mendrika ny manaraka izany mba hanana eo an-tanananao ny Google Assistant.
Ahoana ny fananana Google Assistant amin'ny smartwatch Samsung Galaxy
Ireo dingana tokony harahina afaka manana ny Google Assistant ireto:
Mametraka izahay ireo fampiharana roa ireo aloha samy amin'ny finday:
Toy ny amin'ny famantaranandro: Sintomy avy amin'ny Galaxy Store
Tsy maintsy mamorona rakitra avy amin'ny tranokala Google Cloud Platform ary tahirizo amin'ny telefaonao. Araho ny dingana ato amin'ity horonantsary ity hahafantarana bebe kokoa izay tokony hatao:
Tokony hataontsika apetraho ireo fampiharana Tizen sy Android ireo amin'ny telefaona sy amin'ny fiambenana.
Ny fangatahana alalana dia angatahina isaky ny rindranasa tsirairay ka samy hanondro ny dingana arahiny ny tsirairay.
Vita, efa manana Mpanampy Google amin'ny fiambenana Tizen izahay.
Ny zavatra tokony ho fantatra dia tsy maintsy sokafy ny fampiharana raha tsindrio ny «mihaino» hampavitrika ny Google Assistant, satria amin'izao fotoana izao dia tsy misy baikon'ny feo miasa. Ny raharaha rehetra dia ho raharaha miandry ary afaka ampidirin'ny mpandrindra izany. Na izany na tsy izany, raha ny filazan'ireo izay nanandrana azy dia haingana kokoa ny mamaly noho ny Assistant izay ao amin'ny rafitr'i Google ihany, Wear OS.
Ianao koa dia mila miantehitra fa misy zavatra tsy mandeha. Miresaka momba izany isika fehezo ny fampiharana hafa toy ny famantaranandro na ny hafa mifandraika amin'ny fitaovana. Mazava ho azy, manana ny fehezan-dahatsoratra rehetra efa vonona ianao ary miandry ny mpamorona hampiditra vaovao bebe kokoa fotsiny.
Raha fintinina, fandraisana andraikitra mihoatra ny mahaliana izay tokony hanaitra an'i Samsung. Amin'ny fahitana fotsiny ny fiheverana fa mandray ireo hafatra ao amin'ny XDA sy ireo sehatra hafa, dia ho fantatrao fa ny famerana ny famantaranandronao dia manidy varavarana ihany ka amin'ny farany ny hafa manapa-kevitra ny hividy hafa hanana Google Assistant amin'ny findainy.
Dingana maromaro mankany manana ny Google Assistant amin'ny findainao miaraka amin'ny Tizen 4.0 na avo kokoa Ary avy eto amin'ny Androidsis dia mamporisika anao izahay hanandrana, satria hanana ny herin'ny Google eo am-pelatananao ianao. Faharetana kely ary ho afaka hamily ireo dingana ireo ianao hanananao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fananana Google Assistant amin'ny rindrambaiko Samsung Galaxy miaraka amin'ny GAssist
Ny batterie an'ny Samsung Galaxy Tab S6 dia tsy ho ny suit anao matanjaka tsara
Ny Xiaomi Black Shark 2 Pro dia mampiseho hozatra amin'ny fantsom-panandramana vaovao